यो हिन्दु मन्दिरको रहस्य र चढाइने भेटी बारे थाहा पाएपछि दुनियाँ चकित !
काठमाडौं । विश्वमा धर्म अनुसार मानिसहरुले मान्ने आस्था पनि फरक फरक हुन्छ । एउटै धर्ममा पनि मानिसहरुले अलगअलग आस्थासहित पुजाआजा पनि गर्ने गर्छन । तपाईं, हामी सबैले अहिलेसम्म धेरै मन्दिरहरू देखेका छौँ, जहाँ फरक फरक आस्था राख्ने गरिन्छ ।
उदाहरणका लागि मानिसहरु माता लक्ष्मीसँग धन माग्छन्, माता सरस्वतीसँग विद्या माग्छन् । विश्वभरि थुप्रै मन्दिरहरू छन् जहाँ भक्तहरुले आफ्नै विश्वास र चलनहरूका आधारमा पुजाआजा गर्छन । आज हामी तपाईंलाई एउटा त्यस्तै मन्दिरको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछौं ।
यस मन्दिरका बारेमा जानकारी पाइसकेपछि तपाईं चकित पर्नुहुनेछ । हामी कर्नाटकको एक मन्दिरको बारेमा कुरा गर्दैछौं जहाँ चुरोटलाई पवित्र मानिन्छ । हुनसक्छ तपाईं अचम्मित हुनुभयो होला तर यो सत्य हो । त्यहाँ केहि मन्दिरहरुमा भक्तहरु भेटीको रूपमा चुरोट चढाउछन् ।
Hindu devotees light cigarettes and make offerings at the Aghori Dada Samadhi shrine in Ahmedabad
📸 Sam Panthaky pic.twitter.com/qpzmvZY4zT
हो, भक्तहरूले साबरमती नदीको किनारमा रहेको दधीचि ऋषि आश्रममा चुरोट र गुलाब दान गर्छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार, हरेक बिहिबार सयौं भक्तहरू आफ्नो इच्छा पूरा हुने आशाको साथ यहाँ आउँछन् । त्यसपछि उनीहरुले चुरोट अघोरी दादाको चिहानमा दान गर्दछन् ।
यी सबैमा सब भन्दा खास कुरा यो हो कि यहाँका मानिसहरूले महँगो चुरोट वा फूलहरू अघोरी दादालाई दान दिन सक्दैनन् । वास्तवमा, भक्तलाई भनिएको छ कि ऊनीहरु मात्र सस्तो चुरोट र फूलहरू दान गर्न सक्छन् । जुन त्यहाँको ट्रस्टले उनीहरुलाई निःशुल्क प्रदान गर्दछ ।
यो एक नियम, जुन विलासिताको कारमा आउने व्यक्तिदेखि हिडेर आउँनेहरुले एउटै नियमको अनुसरण गर्नुपर्दछ । वास्तवमा यो भनिन्छ कि गुजरातका धेरै ठूला मन्दिरहरू भ्रमण गरिसकेपछि मानिसहरूले अघोरी दादालाई आफ्नो इच्छा पूरा गर्न चुरोट दान दिन थालेका हुन् । यहाँ भक्तहरूले मन्दिरको र्याकमा आगोको ज्वाला चलाइरहेको प्रसादको अघि राखिदिनु पर्छ, किनभने यस्तो विश्वास गरिन्छ कि यसो गर्दा उनीहरूको चाहना पूरा हुन्छ ।
नेपालमा अयोध्याधामको ‘डीपीआर’ निर्माण सुरु हुँदा भारतलाई पसिना आयो
अर्को जात र धर्मको विवाह बन्देज लगाउने भारतको कानून, पुलिसले आजै पक्रियो, अब के होला ?
हिन्दुहरु मात्र प्रवेश भनिएको आराध्यदेव पशुपतिनाथमा सिख धर्मालम्बीहरुको सम्बन्ध
भगवान श्री कृष्णका कति जना श्रीमती र छोराहरू थिए, दुर्योधन कसरी सम्धी भए ?
प्रवचनले मन्त्रमुग्ध, रुपले लठ्याउने सबैको मनमा बसेकी साध्वी जयाका रहस्य बारे जान्नुहोस्
कोरोना कालको अहिलेसम्मकै गज्जबको विवाह, जन्ती देखि बेहुला–बेहुलीमा समेत दूरी कायम !